Letter to My Little Brother –2| The World of Pinkgold
Letter to My Little Brother – 2
Posted on August 5, 2013 by cuttiepinkgold
မောင်လေးသို့ ပေးစာ (၂)
ခုတလော ဘာတွေလုပ်နေလဲကွယ်။ ရာသီဥတုကလည်း မိုးအေးအေးနဲ့မို့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နော်။ မိုးရေထဲမှာ ထီးမပါပဲ လျှောက်သွား မနေနဲ့အုံး.. သွားတုန်းခဏသာ ပျော်ဖို့ကောင်းတာ… အအေးမိပြီး ဖျားရင်တော့ မလွယ်ဘူး မောင်လေးရဲ့။ ပြောသာ ပြောရတာ ရန်ကုန်မိုးကလည်း လွန်လွန်းအားကြီးပါတယ်။ မမတောင် ရန်ကုန်ရောက်တာ (၁၀) နှစ်ကျော်အတွင်း ဒီလောက် ရွာတဲ့မိုးကို ဒီတစ်ခါပဲ တွေ့ဖူးသေးတယ်။
ဒါနဲ့မောင်လေးလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရော အဆင်ပြေရဲ့လား။ လက်ရှိဘ၀မှာ ပျော်အောင်နေနော်။ မောင်လေးအသက်လည်း ငယ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး။ Professional Life တစ်ခုကို မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားတော့။ မမတို့နိုင်ငံက ခုဆို အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်နေတာ မောင်လေးအမြင်ပဲလေ။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ရော၊ တစ်ခြား လူမှုရေး ၊ နိုင်ငံရေးတွေအတွက်ရော သမာသမတ်ကျတဲ့ Professional တွေဆိုတာ လိုကို လိုလာမှာ။ ဒါကြောင့် အရင်တုန်းက ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ခုချိန်ကစပြီး Professional တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် လုပ်ပါလို့ မမပြောချင်ပါတယ်။
Professional ဆိုလုိ့မောင်လေး မေးမှာကို မြင်ယောင်သေးတယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးကို Professional လို့ခေါ်လဲပေါ့။ အဓိကကတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမျိုးကို မဆို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတိုင်းက Professional ပဲပေါ့။ ပန်းရံဆရာတွေရော၊ သန်းရှင်းရေးသမားတွေရော၊ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်ရော၊ အင်ဂျင်နီယာရော၊ စာရေးဆရာတွေရော၊ စသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေါင်းစုံနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူတွေဟာ Pro တွေပဲပေါ့ မောင်လေးရယ်။ ဒါကြောင့် မောင်လေးအနေနဲ့ ငါသည် အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချင်လဲဆိုတာ ခုကတည်းက သေချာလုပ်ထားဖို့ မမ မှာထားပါရစေ။
ခုခေတ်လူငယ်တွေက ညည်းကြတယ် မောင်လေးရေ။ အလုပ်မရှိဘူး.. အလုပ်မရှိဘူးနဲ့။ တစ်ကယ်က အလုပ်တွေဆိုတာ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာ နေ့တိုင်းနီးပါးကို Vacancy ပေါ်နေတာပါ။ အဲ့ဒီနေရာတွေကို ဖြည့်ဖို့ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတွေမရှိတာရယ်၊ အရည်အချင်းမပြည့်ဝဘူးထားအုံး၊ ခဏလေးလုပ်ကြည့်ပြီး အဆင်မပြေရင်ထွက်သွားချင်တဲ့သူရယ်တွေပဲ များနေတာကို။ ပညာရေးစနစ်ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းအပြစ်တင်နေကြတဲ့ အရာပဲလေ။ ဒါကို မမတို့ပြောင်းလဲလို့မှ မရတာ။ မမတို့ ပြောင်းလဲနိုင်တာက ကိုယ်ကိုတိုင်ကိုပါပဲ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ နေရာကျတဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှာ စိတ်နှစ်ပြီးတော့ လုပ်မယ်၊ အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလည်း ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာမယ်၊ မခိုမကပ်ပဲ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုရင် မဝေးတော့တဲ့ ကာလမှာ ကိုယ်လည်း နေရာအဆင့်တစ်ခုကို ရလာမှာပေါ့။ ခုဟာကလေ လူငယ်တော်တော်များများဟာ အလုပ်ကဖြင့် မလုပ်ရသေးဘူး Facilities ကဘာလဲ၊ ဖယ်ရီရှိလား၊ OT ရှိလားနဲ့ စမေးနေကြတော့တာပဲ။ အလုပ်တစ်ခုမှာ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာ၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပေးဆပ်နိုင်မှု အနေအထားအရ ပေးထားတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဆိုတာ ရှိပါတယ်ကွယ်။ အဲ မြန်မာပြည်ကို တစ်ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော့ ယှဉ်လို့မရသေးဘူးပေါ့။ နောက်ပိုင်းဆို ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ၂၀၁၅ ဆိုရင် အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ လွပ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ရှိလာတော့မယ်။ အဲ့လိုအချိန်မှာ နိုင်ငံခြားက Professional တွေ ၀င်လာတာထက်စာရင် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင် အမျိုးမျိုးအလိုက် Pro တွေ ရှိထားတော့ မကောင်းဘူးလားကွယ်။ မဟုတ်ရင် Local Context ကို ဘာမှ နားမလည်သူတွေရဲ့ အသားလွတ် ဆရာလုပ်တာကို ခံနေရအုံးမယ်။
ဟိုတစ်နေ့ကတောင် လူငယ်လေး တစ်ယောက်နဲ့ မမတွေ့ဖြစ်သေးတယ်။ မမတို့ ရခိုင်ဘက်ပါပဲ။ သူကပြောတယ် ကျွန်တော် ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတယ် အမရယ်တဲ့။ Business Management လည်းလုပ်ချင်တယ်၊ လက်ရှိမှာလည်း အိုင်တီပိုင်းအတွက် သင်တန်းတွေတက်နေတယ်.. အလုပ်ကလည်း ၀င်ချင်နေပြီ။ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိဘူး.. အကြံပေးပါအုံးတဲ့။ ဟုတ်ပြီ မမသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်.. Management ကဘယ်အတိုင်းအတာထိ ရောက်အောင် လေ့လာပြီးပြီလဲ.. အိုင်တီက ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ရောက်အောင် လေ့လာပြီးပြီလဲ.. ကိုယ်တစ်ကယ်လုပ်ချင်တာက ဘာလဲလို့။ သူကပြောတယ်.. အိုင်တီကတော့ တော်တော်ခရီးရောက်နေပြီတဲ့.. ၀ါသနာပါတာကလည်း အဲ့တာပါပဲတဲ့။ ဒါဆိုရင် မမပြောလိုက်တယ်.. အိုင်တီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်သင်နေရတာမှန်သမျှကို စာရွက်မှာ ချရေးကြည့်.. Programming, Networking, Web Developing .. အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အဲ့ထဲကမှ တစ်ခုချင်းစီကို 1 –5ထိ အမှတ်တွေ ပေးသွား.. ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာကို အမှတ်များများပေး.. အမှတ်အများဆုံးကို ခုကတည်းက Specialize လုပ်ဖို့ ပြင်ပေတော့လို့.. မမ အကြံပေးတာ သူ့အတွက် အသုံးတည့်မယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ။ သူ အဆင်ပြေဖို့ကိုလည်း မမမျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်ညီမလေး တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ သူကတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တစ်ခုလုပ်နေတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့။ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေပဲ အလုပ်လုပ်စရာလိုတယ်.. ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ အားနေလို့ Company တစ်ခုမှ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လျှောက်မလို့တဲ့။ သူ့ကိုလည်း မမမေးမိတယ်.. ညီမလေး ဆိုင်က ၀င်ငွေမကောင်းလို့လား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး.. ကောင်းတယ်.. အားနေလို့ အလုပ်လုပ်မှာတဲ့.. ဒါဆိုရင် မမအကြံပေးမယ်လို့.. Language တစ်ခုခုကို ပိုင်အောင်လုပ် ၊ Management နဲ့ ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းကိုတက်.. တစ်ဘက်ကလည်း ၀င်ငွေရတဲ့ စီးပွားရေး တစ်ခုရှိတယ်။ နှစ်နှစ်လောက် နည်းနည်း ဖိဖိစီးစီးကြိုးစားလိုက်ရင် ညီမလေး Level တက်လာမှာလို့.. စီးပွားရေးကို ပညာနဲ့ရော အရင်းအနှီးနဲ့ရော ချဲ့လို့ရတယ်လို့… ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဟုတ်သားနော်လို့ ဖြစ်သွားပြီး သင်တန်းတွေ တက်မယ် ဖြစ်သွားပြန်ရော။ မမပြောချင်တာက ကိုယ့်ရဲ့ Professional Life အပြင် အဲ့တာကို ပိုပြီး တောက်ပအောင်လုပ်မယ့် အထောက်အပံ့တွေလည်း ရှိနေစေချင်တာပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က လှတာတော့ လှတယ်.. ဒါပေမယ့် သူနဲ့ လိုက်မယ့် အ၀တ်အစားတွေ၊ ဖက်ရှင်စတိုင်တွေပါ ထပ်ထည့်လိုက်ရင် သူ့ တစ်ကယ့်ကို အမိုက်စား ဖြစ်သွားတဲ့ သဘောမျိုးပဲပေါ့။
ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ မောင်လေး စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမယ့် အရာလေး တစ်ခုကို မမသတိထားမိပြန်ပါပြီ။ တစ်ကယ့်ကို ကြေးစားလူသတ်သမားတွေကိုရော Professional ခေါ်မလားလို့ မောင်လေးတွေးနေတယ် မဟုတ်လား။ ဒါကတော့ ဒီလိုရှိတယ် မောင်လေးရယ်.. အများအကျိုးအတွက် လုပ်မယ်ဆိုရင် Professional ပါပဲတဲ့.. ။ လူသတ်သမားက နိုင်ငံ့တော်ရန်သူလိုမျိုးလူကို လိုက်လံချေမှုန်းတယ်ဆိုရင် ဒါက သူ့ရဲ့ Professional ပီသမှုပဲ။ သမိုင်းထဲမှာ ငတက်ပြားတို့ ၊ ရော်ဘင်ဟုတို့ဆိုတာ Pro သူခိုးတွေပေါ့။ အံမယ် စာဖတ်ပြီး ပြုံးမနေနဲ့အုံးလေ။ ဒီတော့ သူ့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ရပ်ဟာ လူတွေကို ဘယ်လောက် အကျိုးပြုလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာလည်း Pro ပီသ/ မပီသကို တိုင်းတာပါသေးတယ်တဲ့။
အမရဲ့ ဆရာ တစ်ယောက်က အမကို မေဖူးတယ် ။ Professional နဲ့ Genius ဘာကွာလဲ သိလားတဲ့။ နှစ်ယောက်လုံးကတော့ တတ်တဲ့ ပညာနဲ့ အသက်မွေးကြတာပဲ။ ဘာကွာလဲတဲ့။ အမလည်း မသိဘူးလို့ မပြောချင်ဘူး.. လျှောက်ဖြေတာပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Attitude (စိတ်နေသဘောထား) လားဆရာ လို့မေးတော့ သူက နည်းနည်းလက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိအကျလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူးတဲ့။ အဓိက ကွာတာက Emotion (စိတ်ခံစားချက်) ပါတဲ့။ Professional က စိတ်ခံစားချက်ကို ဘယ်တော့မှ ဦးစားမပေးဘူးတဲ့။ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် တာဝန်ကျေတဲ့အထိ လုပ်ကို လုပ်တယ် … ။ အိမ်မှာပဲ ပြသနာဖြစ်ဖြစ်.. ရည်းစားနဲ့ပဲ ပြသနာဖြစ်ဖြစ်.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Personal နဲ့ Business ကို ခွဲထားတယ်။ ဒါမှ အလုပ်မှာ အောင်မြင်ပြီး အသက်ထက်ဆုံး ရပ်တည်သွားနိုင်တာပေါ့တဲ့။ သူက ဥပမာတောင် ပေးသွားသေးတယ်.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် Genius ဖြစ်ပြီး ၊ ဦးသန်းရွှေသည် Professional တဲ့။ ဟုတ် မဟုတ်တော့ မောင်လေး စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွယ်။
ဒါကြောင့် မောင်လေးရေ.. ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေတာတွေကို တန်ဘိုးထားပါ။ တစ်ခုခုကို ကျွမ်းကျင်အောင် စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ပါ။ မမတောင် အသက် (၂၆) ကျမှ ငါ ဘာကို ၀ါသနာပါတယ်ဆိုတာ တွေ့သွားတာ။ မောင်လေးက ငယ်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ငွေနောက်ချည်းပဲလည်း မလိုက်နဲ့အုံးနော်။ Professional ဖြစ်လာရင် ငွေက ကိုယ့်နောက်ကို လိုက်လာမှာ မောင်လေးရဲ့။ စိတ်သဘောထားကို မှန်အောင်နေပါ။ အလုပ်ကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းအောင်လုပ်ပါ၊ ရိုးသားပါ၊ နှိမ့်ချပါ၊ ဒါတွေကတော့ Pro တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေပဲလေ နော်။ စီးပွားရေးတွေ ဒီထက်မက ပွင့်လာတဲ့ တစ်နေ့မှာ မမတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဦးဆောင်သူ နေရာမှာ ရှိနေတာကို မမ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်နေတယ်။
မမလည်း ကြိုးစားနေတယ်။ မောင်လေးလည်း ကြိုးစားပါ။
Filed under တွေးတွေးရေးရေး |	Leaveacomment